Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba David Beckham Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Legend onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Dave'.
Anyị David Beckham Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Manchester United na English Football Legend na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch obere ihe ọmụma banyere ya. Ugbu a gaa n'ihu, ka anyị bido;
Akụkọ David Beckham nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezin’ụlọ:
David Robert Joseph Beckham mụrụ na 2nd nke May 1975 na Leytonstone, London, nke David Edward Alan Beckham (nna) na Sandra Georgina West (nne) dere.
E mere ya baptizim David Robert Joseph Beckham - na-ewere aha nna nna ya.
David Beckham bụ naanị nwa nwoke ezinụlọ ahụ nwere. Nwa nwoke n'etiti umuaka nwanyi abuo, Beckham toro na ndi nne na nna na umuaka ndi nwere obi uto na Manchester United, akwukwo ndi ozo nke England.
David ketara ịhụnanya nke ndị mụrụ ya na Manchester United, na isi egwuregwu ya bụ football.
Mgbe David bụ nwata, nna ya, Ted mere bọọlụ site na sọks akpọrọ maka ya ịkụ. Ọ ghọrọ ihe ịtụnanya site na mgbe ọ nwere ike izipụ bọọlụ bọọlụ.
Ka ọ na-erule afọ anọ, ọ na-atụgharị usoro ya ruo ọtụtụ awa n'izu n'ime ogige dị nso n'ụlọ ya. Ọchịchọ ya malitere n'oge a.
N'ajụjụ ọnụ 2007, Beckham kwuru na; “N'ụlọ akwụkwọ mgbe ọ bụla ndị nkụzi jụrụ, sị, 'Gịnị ka ị chọrọ ime mgbe ị toro?'
M ga-asị, 'Achọrọ m ịbụ ndị nrịba ama.' Ha ga-asị, 'Ee e, gịnị n'ezie ka ịchọrọ ime, maka ọrụ?' Mana nke ahụ bụ naanị ihe m chọrọ ime. ”
David Beckham Biography - Ndụ Mmalite na Football:
Mgbe David bụ 7, Ted na Sandra (nne na nna ya) nyere nwa ha nwoke ka ha gaa na Manchester United ọzụzụ ọzụzụ.
Ha ga-anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị kilomita abụọ na ngwụsị izu ọ bụla iji leta ya. David Beckham toro toro eto ma maa nma kari ihe ha turu anya ya.
Mgbe ọ dị obere, Beckham gosipụtara nkwa nke ya dị ka ndị na-agba ụkwụ, na-emeri asọmpi Bobby Charlton Soccer Schools National Skills n'asọmpi na 13 afọ.
N'oge na-adịghị anya, talent ya jidere ndị isi otu egwuregwu Manchester United, bụ ndị gwara ya ka ọ nwalee maka ọgbakọ ndị ntorobịa.
Ka ọ na-erule afọ 16, Beckham hapụrụ ụlọ ma na-egwu egwu maka ngalaba ọzụzụ ọzụzụ United. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ mere klọb ahụ, na 1995, ọ bụ onye na-amalite oge.
David Beckham Biography - Nna Ya:
Nna ya, David Edward Alan Beckham makwaara dị ka 'Ted' bụ onye nrụzi ngwa ọrụ na ihe ndozi kichin.
Ọ nọ nna ya nso ma hụ ya n'anya ịsọpụrụ ya maka ume o ji zụlite ya nwoke.
N'otu ụbọchị nna, David Beckham kwuru; "Nna Obi Ụtọ Nna Nna ... Ekele dịrị maka nkwado niile ị nyela m kemgbe ọtụtụ afọ ...,"
Nna David Beckham na nwunye ya Sandra kewara, wee gbaa alụkwaghịm na 2002 mgbe afọ 33 nke alụm di na nwunye.
Nke a bụ ebe Beckham si dị anya site na nna ya nke na-agwaghị ya na ọ na-ahapụ nne ya. Ma David Beckham na ụmụnne ya nwanyị Lynne na Joanne tara ya ụta maka nkwụsị ahụ.
David Beckham Bio - Okwu na Nna:
Ndaba ahụ, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, nke alụmdi na nwunye nke nne na nna ya, bịara tupu ọpụpụ Beckham na Manchester United gaa Real Madrid.
'Ted' nna ya fere Man United ofufe n'oge ọ bụ nwata. Ted mụtara akụkọ banyere nwa ya nwoke, ọ bụghị n'aka David n'onwe ya kama site n'aka onye ọrụ ya.
Nke a metụrụ ya n'ahụ "Dị ka sledgehammer". O megidere mmegharị ahụ ma bo onye njikwa Man Utd, Sir Alex Ferguson ebubo na ọ raara ya nye.
N'iwe na ihere, Beckham jụrụ ịkpọ nna ya ka ọ lelee ya ka ọ banye na nkwekọrịta ọhụrụ ya na Real. Obi gbawara Ted.
"Amaghị m ma m nwere ike ịme mmekọrịta m na ya," Ted kwuru. “Anyị agbabeghị aka. Enweghị nnukwu iwe iwe m ịbanye na mbinye aka ya. Akpagbu m m, n'ezie. Anọ m ebe ahụ kemgbe ụbọchị mbụ ma nke ahụ kpasuru m iwe.
Agaghị m agbaghara ya maka nke ahụ. ”Ezigbo nchekasị nke nna na nwa nọ na-enwe ọganihu site nhụ anya nkịtị.
"Etuola m ya - nke ahụ bụ mmetụta m," Ted kwuru n'oge ahụ. “Anyị atụfuola mmekọrịta ahụ anyị nwere n'etiti anyị. Ọ ga-aka njọ ugbu a ọ gara Madrid.
M ka ga-arụ ọrụ ma enweghị m ike ịfefe na Madrid kwa izu. Mgbe ọ nọ na Manchester United, enwere m ike ịgba n'ụgbọala ma nyara n'okporo ụzọ. Enweghị m ike ime nke ahụ ugbu a. Ihe kacha atụ m ụjọ bụ na ọ gbasara anyị. ”
DAVID Beckham nna nwụrụ site na nkụchi obi mgbe ọ dị afọ 59. Ọ nwụrụ na ụgbọ ihe mberede na-akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ maka ịwa ahụ mberede iji kpughee akwara.
David Beckham nọnyeere ya n'oge ahụ ma weghachite ya tupu ya anwụọ.
Nne nke Football Legend Sandra bụ onye na-edozi isi.
Ọ na-elekọta ụmụ nwa ya oge ọ bụla ya na nwunye ya na-aga njem nlegharị anya.
Mmekọrịta Mmekọrịta Mmekọrịta na Victoria Beckham:
Nkwuwa okwu ya na ịdị mma ya nyekwara ọtụtụ ikike ọpụpụ. Nwanyị ukwu ahụ gụnyere ndị nwere mmasị na-abịa Prestigious Old Trafford iji lelee ya ka ọ kpọọ. Ọ maghị na otu n'ime ụmụ agbọghọ ahụ na-eme ihe ụtọ masịrị ya.
Na 1997, Beckham malitere ịlụ Victoria Beckham, mgbe ọ gara egwuregwu Manchester United.
A maara ya nke ọma "Posh ose" nke ìgwè egwu egwu Ụmụ nwanyị na-esi ísì ụtọ, otu n'ime ndị kachasị elu n'ụwa n'oge ahụ. Nakwa n'oge ahụ, Beckham na-eduga ndị otu ya na nnukwu mmeri.
Akara Beckham naanị uru bara uru mgbe ọ zutere Victoria Adams, nke a makwaara dị ka "Posh Spice" nke Spice Girls, na 1997. Ha abụọ hụrụ n'anya ngwa ngwa na mmekọrịta ha n'otu ntabi anya dọtara nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi.
A kpọrọ di na nwunye ahụ “Posh na Becks”Site na mgbasa ozi. Ọ gwara ya na 24 Jenụwarị 1998 na ụlọ oriri na ọ restaurantụ inụ na Cheshunt, England.
Na March 4, 1999, ezigbo Victoria na Beckham mara mma nwere nwa mbụ ha, nwa nwoke ha kpọrọ Brooklyn Joseph.
Ọnwa abụọ ka e mesịrị, Beckham na Victoria kekọtara eriri na agbamakwụkwọ dị $ 800,000 na nnukwu ụlọ dị na mpụga Dublin, Ireland.
Alụmdi na nwunye ya na onye bụbu Spice Girl kpaliri ya n'ime ala kachasị omimi nke ndị ama ama ama ama ama ama ama. Ọ ghọrọ ụdị nwoke kachasị amasị n'ụwa.
Na July 2011, ya na nwunye Victoria Beckham, bụ ndị nwere ụmụ nwoke atọ (Brooklyn, Romeo na Cruz), kpọbataara otu nwa nwanyị, Harper Seven, n'ezinụlọ ha.
Beckham bu onye ezinaụlọ ma kwuputara na o bu ihe nlereanya nye ndi nna ndi ozo. Na June, a ghoputara ya dị ka nna a ma ama na ndị nna ga-achọ ịdị ka ya.
David Beckham egbugbu:
Ọ ga-esiri anyị ike ịchọta ihe David Beckham na-eche banyere ezinụlọ ya, n'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya mgbe ọ na-abanye n'okpuru agịga maka egbugbu na-asọpụrụ nwunye ya na-ese anwụrụ ọkụ, ụmụaka, ndị nne na nna, ndị ọ hụrụ n'anya na nkwenkwe.
O nwere ihe karịrị 40 tattoos, onye nke ọ bụla nwere ihe pụrụ iche ma nwee atụmatụ pụrụ iche.
David Beckham kacha mara nke ọma maka nchịkọta ink dee ya mgbe niile.
Beckham ka na-egwuri egwu na uwe elu ogologo iji kpuchie aka ya na-echebara ndị ọzọ nwere ike ịda mbà n'ihi nkwenkwe ha.
Ndụ David Beckham - Ole Ọgaranya Beckhams bara? Ọgaranya karịa Queen?
Ezinụlọ Beckham ghọrọ igwe na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ otu oge, akụ na ụba ha na-ekelekwa ọnụọgụ dị ịtụnanya.
Ezinụlọ ahụ dum ruru ihe ruru ọkara ijeri pound dịka ndị ọkachamara na-emepụta akara.
David na Victoria dị iche iche azụmaahịa achụmnta ego, yana arịrịọ ire ahịa nke di na nwunye ahụ na ụmụ ha, Brooklyn, Romeo, Cruz na Harper.
Ha na-eme atụmatụ na ezinụlọ bụ otu mgbe £ 470m. O bilitere na uru site na £ 30m ruo m 40m kwa afọ. Nke ahụ na-eme ka ezinụlọ baa ọgaranya karịa Queen.
Dabere na Sunday Times Rich List, atụmatụ ego nke Queen bụ £ 340m dị ka n'oge ntụnyere ha. Na 2013, David Beckham depụtara ndepụta nke ndị egwuregwu bọọlụ iri ise kachasị baa ọgaranya n'ụwa. O nwetara £ 175million na-eti Lionel Messi £ 115.5million na C Ronaldo.
A gbakọrọ akụ ya akụnụba a na-ahụ anya, gụnyere akụkọ nke afọ ọ bụla e nyere Ụlọọrụ Ụlọọrụ, ihe onwunwe, nkọwa ụgwọ, ego na azụmahịa ndị ọzọ. N'afọ ahụ bụ afọ ọganihu ya kachasị mma ọ bụ ezie na ọ dị mma n'oge mgbụsị akwụkwọ nke ọrụ egwu ya.
Okpukpe David Beckham:
Ọ bụ onye Juu ma na-ekpe okpukpe ndị Juu mgbe ụfọdụ. Nna nna Beckham bụ onye Juu, Beckham kwukwara na ya bụ “Ọkara nke ndị Juu.
Na autobiography ya, o dere ..“Ọ ga-abụ na mụ na ndị Juu akpakọrịta karịa okpukpe ọ bụla ọzọ. M na-eyiri skullca ọdịnala ndị Juu mgbe m dị obere, m na-esokwa nna nna m aga agbamakwụkwọ ụfọdụ ndị Juu. ”
N'ihi ya, ọ bụrụ na nne nne ya bụ onye Juu, nne ya bụ Sandra, ya bụ Devid. Enwere asịrị n'agbanyeghị na David Beckham - naanị n'ihi na o nwere nnukwu egbugbu na Hibru na ogwe aka ya - agbanweela Kabbalah (Okpukpe ọzọ sitere n'okpukpe ndị Juu).
Ogbugbu ya nke Hibru sitere na Agba Ochie nke Abụ nke Abụ wee kwuo n'asụsụ Hibru: "Abụ m maka onye m hụrụ n'anya, onye m hụrụ n'anya dịkwaịrị m, onye na-azụ atụrụ dị ka ahịhịa dị ka rose."
David Beckham Bio - Ọrịa Ahụike:
Beckham na-arịa ọrịa a na-akpọ nsogbu na-agwụ ike (OCD). Nke a ọ na-ekwu na-eme ya Nwee ihe niile n'ahịrị ma ọ bụ ihe niile kwesịrị ịbụ ụzọ abụọ. ” Victoria Beckham kwuru, sị,
“Ọ bụrụ na ị meghe ngwa nju oyi anyị, a na-achịkọta ya abụọ. Anyị nwere friji atọ - nri na otu, salad na nke ọzọ yana ị drinksụ ihe ọ inụ inụ na nke atọ.
N'ime ihe ọ theụ theụ otu, ihe niile dị nha. Ọ bụrụ na iko atọ dị, ọ ga-atụfu otu n'ihi na ọ ga-abụ ọnụ ọgụgụ. ”
David Beckham Affairs na Ebubo:
Nke mbụ mere na August 2002. David Beckham dere Selena Laurie. Laurie kwuru na ha na ya nwere mmekọrịta nwoke na nwanyị na 7 August 2002 na Denmark.
Na April 2004, British tabloid Akụkọ nke Ụwa nke Beckham bu onye enyemaka nke mbụ Rebecca Loos kwuru.
Mgbe Beckham sonyeere Real Madrid na 2003, ọ kwagara Spain wee pụọ nwunye ya, Victoria Beckham. Loos rụrụ ọrụ maka otu ndị ọrụ Beckham ma na-enyere aka na mgbanwe ya.
N'oge na-adịghị anya mgbe ọ kwagara, Loos nwere mmekọrịta nwoke na nwanyị na David. Otu izu ka e mesịrị, onye Australia bụ nwa amaala onye Australia bụ Sarah Marbeck kwuru na Beckham sokwa ya nwee mmekọrịta nwoke na nwanyị ugboro abụọ.
Beckham wepụrụ ebubo abụọ ahụ dịka "ludicrous".
Na Septemba 2010, Beckham kwuputara na ya na-etinye akwụkwọ ikpe n'ụlọ ikpe megide akwụna Irma Nici na ọtụtụ ndị ọzọ maka ebubo na akwụkwọ akụkọ ahụ 'Na Aka ' na ya na nwunye ya na-emekọ ihe.
Ọ bụ ezie na magazin ahụ mechara kweta na ebubo ahụ e boro Beckham abụghị eziokwu, a kagburu akwụkwọ ikpe ya n'ụlọ ikpe n'okpuru nnwere onwe iwu nke US ikwu okwu.
David na Victoria Beckham kwere nkwa inye onyinye ọ bụla ha nwetara site na Irma Nici maka ọrụ ebere ụmụ ha.
David Beckham Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Beckham malitere igwu egwu Manchester United, ndị England na-agba bọl, mgbe ọ dị afọ 18 ma bụrụ onye mbido site na afọ 20.
N'elu ubi, Beckham agbaghara mmeri. Na 1999, o duru Manchester United rue Premier League, iko FA, na Champions League.
N'ihi nnwere onwe ikpeazụ nke ịgba ọsọ megide Greece na 2001, England ruru eru maka 2002 World Cup. N'afọ ahụ, Beckham bịanyere aka na nkwekọrịta afọ atọ $ 22 iji nọrọ na Manchester United.
Ma oge Beckham na United gosipụtara mkpụmkpụ karịa onye ọ bụla chere. Na 2003, Real Madrid nwetara ya na ihe ijuanya nke azụmahịa nke mere ka nghọtahie Beckham na onye njikwa Manchester, Sir Alex Ferguson pụta.
Ndị na-agba bọl na Spanish nwere obi ụtọ na ha ga-abata na ha. Ndị America, ka ọ dị ugbu a, na-achọ ịmata ya na ntọhapụ nke ihe nkiri ahụ, Họọ ya Dị ka Beckham.
Nke a bụ ihe nkiri na-enye obi ụtọ nke na-akọ akụkọ banyere otu nwatakịrị nwanyị nke na-ebu ụzọ omenala ezinụlọ ya wee nwee mmasị na bọl Bekee.
David Beckham Bio - Ihe mere O ji hapụ United:
Eziokwu ka a gwara, David Beckham zipụrụ na Manchester n'ihi na midfielder "Chere na ọ ka ibu karịa Alex Ferguson".
N'ihe banyere mmebi ha dị egwu na mmekọrịta ha, Alex na-ekwu na "Ọnwu ọnwụ" a na-ada ụda mgbe David Beckham gbaghaara ikike ya ozugbo.
Na 2003, Ferguson ya na United onye na-akpọ David Beckham na-etinye aka na ụlọ ejiji. Ọ boro Beckham ebubo na ọ kwụsịrị ịgbaso ihe mgbaru ọsọ Arsenal na Old Trafford.
A sịrị na Ferguson tụgburu bọọlụ bọọlụ na nkụda mmụọ, nke kụrụ onye ọkpụkpọ ahụ ihu ma kpatara Beckham mmerụ ahụ.
David Beckham mere ihe. O kwere ka ọnya ahụ see foto ma gbaa ajụjụ ọnụ n'echi ya.
Mgbe ọ hụrụ ọrụ ya, Ferguson mere mkpebi ire ya. O kwenyere na Beckham chere na ọ tofeela ya na ụlọ ọrụ ya.
Ferguson mgbe o dere na Beckham nwere nsogbu ihu ya mere ya ka ọ bụrụ onye a ma ama. Dị ka ya si kwuo 'O nwere mkpebi siri ike ịchụso ama site n'ọhịa mgbe mmerụ ahụ gasịrị'.
Ọ na-edekwa na ọ dịghị “Ihe kpatara footballing” ka Beckham gaa Los Angeles. 'O mebiri ohere ịghọ akụkọ ifo na-adịgide adịgide nke United.' Ferguson kwuru.
David Beckham Bio - Apdị na Ihe nkiri:
Beckham apụtaghị n'onwe ya na 2002 ihe nkiri 'Bend It Like Beckham, ' belụsọ n’ihe esere na Archive. Ya na nwunye ya chọrọ ịpụta ọbịbịa, mana ịhazi usoro siri ike, yabụ onye ntụzi ahụ ji ọdịdị anya, Andy Harmer, kama.
Beckham na-egosi Zinedine Zidane na Raúl, na 2005 nkiri Mgbalị!. Ọ na-ejikwa ya eme ihe ugboro abụọ maka nnọkọ ahụ.
Beckham n'onwe ya pụtara na usoro 'Mgbaru Ọsọ II: Ibi Nrọ Ahụ ' na ọrụ ka ukwuu, mgbe a na-ebufe onye isi ihe nkiri na Real Madrid.
Oge a, akụkọ a dị na ndị otu Real Madrid, ma e wezụga Beckham, ndị ọzọ na-ebi ndụ Real Madrid na-apụtakwa ma na-apụ na pitch, n'akụkụ ndị akụkọ ifo.
Site na iji eserese eserese sitere na 2006 FIFA World Cup, Beckham pụtara Goal III: Na-ebido ụwa, nke a tọhapụrụ gaa na DVD na 15 June 2009.
N'agbanyeghị na ọ kwagara Los Angeles, California, Beckham egosighi mmasị ọ bụla na nchụso ọrụ, na-asị na ya onwe ya kwa “Stiif”
Otú ọ dị, n'ihi ọbụbụenyi ya Guy Ritchie, o meela ihe ngosi abụọ na fim Ritchie: dị ka projectionist na Nwoke nke UNCLE (dabere na usoro 1964 MGM nke otu aha telivishọn), na dị ka ịkpalite King Arthur: Akụkọ Mgbe Ochie nke Agha.
Ihe America nwere mmasị na Beckham na afọ iri nke ịchịisi ya kwụsịrị na 2007 mgbe bọọlụ bọọlụ gafere gafee Atlantic iji banye na afọ ise a kọọrọ, $ 250 nde na LA Galaxy.
Mbugharị ahụ bụ ihe dị ukwuu banyere inye Victoria Beckham ọrụ nkwado (ọ nyeere aka ịme mkpebi ịkwaga States) dịka ọ bụ inye bọọlụ Major League Soccer nke America na ogwe aka.
N'ime awa 48 nke mbinye aka ahụ, Galaxy rere karịa tiketi 5,000 oge.
Obodo Rocky America:
Ọrụ Beckham kemgbe ọ kwagara United States, ọ bụ nke dị egwu.
Ọ na-adakwasị ya site na mmerụ, na-agbapụ ligament ikpere ya oge mbụ na LA, ma mesịa mefuo na ohere iji kpọọ na 2010 World Cup n'ihi na achilles tendon mmerụ ahụ.
Na 2012, Beckham mere ka ihe ịga nke ọma ya site na ịbanye na azụmaahịa ọhụrụ, na-amalite akwa uwe maka ụlọ ọrụ H&M.
Dị ka akụkụ nke mgbasa ozi ahịa Beckham na H&M, a kpụrụ ihe oyiyi 10 nke ụkwụ nke kpakpando bọl na uwe ime ya na New York City; ndị ọzọ arụnyere na Los Angeles na San Francisco. O mechara kwaga PSG ka ọ gaa n'ihu n'ọrụ ya.
David Beckham Bio - ezumike nká nke mmetụta uche:
Na May 16, 2013-ụbọchị ole na ole mgbe ọ meriri aha na Paris Paris-Germain-Paris-Beckham 38 kwupụtara na ọ ga-ala azụ na njedebe nke 2013 oge, na-agwụ ọrụ ọrụ bọl 21.
Na nkwupụta o kwuru na anya mmiri n'anya ya: “Enwere m ekele maka PSG maka inye m ohere ịga n’ihu mana ọ na-adị m ugbu a bụ oge kwesịrị ka m rụchaa ọrụ m, na-egwuri egwu n’ogo kachasị elu.
O kwukwara, sị: “Ọ bụrụ na ị gwara m dịka nwatakịrị, agara m egwuri egwu ma soro ndị ntorobịa m bụ Manchester United merie iko. N'ikwu nke a, jiri nganga na-egwuri egwu ma na-egwuri egwu maka mba m ihe karịrị otu narị ugboro wee kwụ n'ahịrị maka ụfọdụ klọb kachasị n'ụwa, agara m agwa gị na ọ bụ echiche efu. Enwere m ihu ọma na m rọrọ nrọ ndị ahụ. ”
Oge ezumike nká ya na-eweta njedebe ọrụ dị iche na nke ọ bụla ọzọ. Nwa nwoke a gbara afọ iri asatọ na asatọ ghọrọ onye England mbụ meriri aha ndị mba anọ na mba 38.
Nke ahụ bụ Manchester United (England), Real Madrid (Spain), LA Galaxy (US) na PSG (France). Oge ya na United bụ ihe a na-echefu echefu, ebe o meriri aha isii Premier League, iko FA abụọ na Njikọ Njikọ.
David Beckham Biography - Na-eme Nnukwu Ihe Mgbe Retla ezumike nká:
Dị ka anyị niile maara, onye bụbu onye isi England, David Beckham, lara ezumike nká na bọọlụ ọkachamara na 2013, mana ihe ị nwere ike amaghị bụ na ezumike nka ya ga-eme bụ nnukwu ọrụ.
Na nnọkọ ogbako na February 5, 2014, Beckham kwupụtara atụmatụ ya maka ndị otu MLS ọhụrụ na Miami, na olile anya ya na a ga-eme ya n'oge adịghị anya.
Ma eleghị anya, akụkọ ahụ "Ozugbo onye ọkpụkpọ bọl, mgbe ọ bụ onye ọkpụkpọ bọl"? dabara adaba na akụkọ David Beckham zuru oke. Ọ bụ ezie na ugbu a lara ezumike nká, mana ike agwụghị gị. O gosipụtawo onye ọ bụla na ọrụ ịgba bọl ya akwụsịghị na PSG.
Beckham kpebiri ịlaghachi azụ na ịgba bọọlụ na ịgba bọọlụ inwe. O doro anya na ọ nwere ezigbo aka na-arụrụ ya ọrụ.
A nụala ya na aha ndị otu ya ga-abụ "Miami Beckham United" nakwa na ọ ga-ejikọta na Mahadum Miami.
N'agbanyeghị aha ma ọ bụ ọnọdụ, isi ihe bụ na Beckham na-eme ihe ya ma na-eme ya BIG. Onye egwu bọọlụ dị ịtụnanya na -emepụta otu egwuregwu bọọlụ nke ya ma na-ewuru ya ama egwuregwu ọhụụ. Unu na-aga!
Obi gbawara site na mkpebi Ọkpara ya ịghara ịkụ bọl:
Beckham gwara ABC News na ọ ga-ahụ ụmụ ya n'anya ịgba bọọlụ ọkachamara mgbe ha tolitere, mana ọ bụrụ naanị na ọ ga-eme ha obi ụtọ.
Otu n'ime ụmụ m nwoke chigharịkwuuru m ụbọchị gara aga wee sị, 'Papa, ị maara, amaghị m na m chọrọ igwu bọọlụ oge niile…' O mebiri obi m ntakịrị, ' Beckham kwuru.
O kwuru na nwa ya gwara ya, sị: "Oge ọ bụla m rutere n'ọhịa ahụ, amaara m na ndị mmadụ na-asị, 'Nke a bụ nwa David Beckham', ma ọ bụrụ na adịghị m mma ka gị, ọ gaghị adị mma."
“Ọ sịrị, 'Ọ dị mma, kwụsị ebe ahụ… play na-egwu n'ihi na ị chọrọ igwu,'